I-Linux Mint 20: ukuze wongeze inkxaso yeephakeji ze-Snap | Ubunlog
Uyenza njani kwakhona inkxaso ye-Snaps kwiLinux Mint 20 ... ukuba unomdla
IPablinux | | Linux mint
Ukuba uze apha ucinga ukuba eli nqaku alivakali, mandikuxelele ukuba ngokuyinxalenye ndiyavumelana nawe. Kwabaninzi, yenye yezona zinto zibalulekileyo ekunomdla kuzo Linux i-20 ngokuchanekileyo iyakususa iiphakheji zeCanonical's Snap, ezingathandwayo njengeFlatpak. Kodwa ukunyaniseka, kunokwenzeka ukuba siyakufumana into ethi umphuhlisi wayo asinike yona kwi-snapcraft.io (njengeChromium), okanye kwindawo yokugcina engekho semthethweni ethi, ukongeza ekungakhuselekeni kangako (nangona zihlala kunjalo), Siza kufaka ukuxhomekeka esinokukhetha ukungakufaki. Kuya kuba kule meko, ukuba sifuna isoftware ethile kunye nepakeji, xa kufanelekile ukulandela le khokelo.
Kodwa njengoko benditshilo kwelinye inqaku, ukhetho olunye kukungalandeli le miyalelo kwaye ukhethe ukuhanjiswa okuxhasa i-snaps ukuba siyayifuna ngokwenene, njengayo nayiphi na incasa esemthethweni Ubuntu. Into echazwe apha yeyabo basebenzisi bafuna qhubeka nokonwabela iLinux Mint kwaye ukhetha ukufikelela kwiiphakheji ze-Snap. Umbono wokuyipapasha wandinikwa nguJoey Sneddon, owathi wenze okufanayo kolunye udidi oluphambili lwe-Ubuntu.
Ukufaka kunye nokwenza i-snapd kwiLinux Mint 20
I-Linux iMint 20 ibikhona Ikhutshwe namhlanje kwifom ye-beta, kwaye apho kungcono kunakwinguqulelo yovavanyo yokuvavanya izinto ezinje. Into esiza kuyenza ukufaka ezinye iipakeji kwaye senze utshintsho, kodwa ndingathanda ukukunyanzela oko Andizukubenza ukuba andixhomekekanga kwi-app efana no-Snap kwaye andifuni ukuyeka ukusebenzisa iLinux Mint xa isungula iLysia yayo. Ukuba usenomdla wokulandela esi sifundo, kwaye ukuba akunjalo, sukundigxeka kakhulu ngokwabelana ngolu lwazi, into ekufuneka uyenzile yile ilandelayo:
Sivula usetyenziso lwesiphelo sendlela.
Emva koko, sifaka iphakheji ngalo myalelo ulandelayo:
Oku kungasentla kuyafuneka kuba, njengoko ingxelo ka-Leo Chavez, ipakethe ye "snapd" ayinakufakwa kwindibano kuba iLinux Mint 20 iyayithintela; ibonisa impazamo yokuba awunamgqatswa wofakelo. Ngale nto ichaziwe apha ngasentla, le ngxaki kufuneka ilungiswe. I-Linux Mint 20 ibandakanya ifayile yoqwalaselo ebizwa ngokuba nnap.pref equka lo myalezo ulandelayo:
Msgstr "" "I-Linux Mint ayisayixhasi iVenkile yoBuntu engumnini mthombo ovulelekileyo womxhasi 'snapd' ayiqhagamshela".
Ngeli qhinga lincinci, kufanele ukuba sele sikwazi faka iChromium KwiLinux Mint 20. Ngaba uza kuyenza okanye ungathanda ukushiya iLinux Mint 20 nefilosofi entsha kaLefebvre kunye neqela lakhe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Linux mint » Uyenza njani kwakhona inkxaso ye-Snaps kwiLinux Mint 20 ... ukuba unomdla
Umsebenzisi weLinux sitsho
Isiteyitimenti esikwi-linux mint blog malunga ne-snap (d) kunye ne-chromium njenge-snap iyavakala, yinto ehlekisayo.
Ikamva leLinux Mint likwisiseko seDebian, esilunge ngakumbi kunesiseko seBuntu.
Yiya into yabo iya kuba kukuba iMint iqulunqe eyayo iphakheji yeChromium (usebenzisa, umzekelo, leyo igcinwe nguDebian), kuba oko bazimisele ukukwenza ukuthumela abasebenzisi ukukhuphela iphakheji ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi ye-chromium akukho nzulu (kwaye a umngcipheko womsebenzisi ongazukufumana uhlaziyo lwenkqubo).
Andiqondi ukuba iyakuba yimfuneko. I-Linux Mint iphunyezwa ngcono kakhulu kune-Ubuntu, ndiyathemba ukuba bangasuswa ekuhambeni kwexesha ukuya kwi-Debian njengesiseko.
Ingxaki kukuba ukuba Ubuntu benza oku ngesoftware engakumbi ... kuya kufuneka idibanise. Kungcono ukusika ilahleko zakho ngaxeshanye.
Ndiza kufaka i-snap, ukubona ukuba iyasebenza.
I-flatpak indinika i-LOT yeengxaki xa ufaka, ukuvuselela kwakhona, njl.
ngaphandle koko ndifuna ukuvavanya i-anbox, ethi ingasebenzi kwi-repo ye-LM repo
yenzayo Iinyanga ze9
Kakhulu obrigado !!!! ekugqibeleni ufake i-essa bagaça. I-Linux inzima kakhulu kwi-mexer mds, iphambukile kwiifestile, kufanelekile msm.
mhlobo, kwiminyaka emibini ezayo ndiyakuxelela ukuba ndiyakuthanda, enkosi!
IMatrix, inkqubo yolwazelelo enikezelweyo kunye ne-encrypted kunye nenethiwekhi evulekileyo
I-Linux Mint 20 Beta, ngoku ungazama u "anti-snap" uguqulelo lwe-Ubuntu mint flavour